Iziganeko eziqhelekileyo, iiprofayili eziphezulu kakhulu, amatyala olwaphulo-mthetho aqhutyelwa ngamadoda ayenziwa ngabantu, kodwa kukho kwaye abaninzi baye bafumana inkohlakalo yokuziphatha kakubi. Abasetyhini abachazwe apha okanye okanye babulawa ejele eCalifornia, bagwetyelwe ukuba bazaliswe ngenxa yobugebengu babo obubi.
UMaría del Rosio U-Alfaro wayengumlwelisi oneminyaka eyi-18 ubudala xa ngoJuni 1990, wangena endlwini yomhlobo ngenjongo yokuphanga intsapho ukufumana imali yeziyobisi. Umntu oyedwa owayengumntakwabo ngumntakwabo womhlobo wakhe, u-Autumn Wallace oneminyaka eli-9 ubudala.
I-autumn yamkela u-Alfaro, ngoko wamvumela ngaphakathi kwindlu yase-Anaheim xa ecela ukusebenzisa indlu yokuhlambela. Ngaphakathi ngaphakathi, u-Alfaro wabetha iAmbumn ngaphezu kwama-50 waza wamshiya efa kwindawo yokuhlambela. Wandula ke wambamba izinto azonokutshintshiselana ngazo okanye azithengise iziyobisi.
Ubufakazi befingerprint bukhokelela abaphandi ku-Alfaro kwaye ekugqibeleni wavuma ukubulala iAmpom, ethi wayenza ngenxa yokuba wayesazi ukuba umntwana wamqaphela njengomngane wakhe.
Ukusoloko egxininisa ukuba wazibulala ngokwakhe, u-Alfaro watshintsha ibali lakhe ngexesha lokuvavanywa waza waphosa umunwe kumntu ogama linguBeto. Kuthatha amajuri amabini ukugqiba isigwebo. Ijaji yokuqala yafuna ukuba yiBeto ngaphambi kokugqiba isigwebo. Ijury yesibili ayithenganga ibali malunga neBeto nonke kwaye i-Alfaro igwetyelwe ukufa.
UDora Buenrostro, waseSan Jacinto, eCalifornia, wayeneminyaka engama-34 ubudala xa wabulala abantwana bakhe abathathu ngenzame yokufumana indoda yakhe yangaphambili.
Ngo-Oktobha 25, 1994, uBurorostro wabulala intombi yakhe eneminyaka engama-4 ubudala, uDeidra, ukuba abulawe ngommese kunye nepeni yebhola, ngelixa behamba emotweni eya ekhaya lakhe. Kwiintsuku ezimbini kamva wabulala abanye abantwana ababini , uSusana, 9, kunye noVicente, 8, ngokubetha ummese emakhaleni abo njengoko belele.
Emva koko wazama ukumisa umyeni wakhe owayengumyeni ngokuxelela amapolisa ukuba uDeidra wayeye naye kwiveki elalibulewe kunye nokuba indoda yakhe yangaphambili yafika kwindlu yakhe ngommese ngobusuku bo babini babulawa. Waxelela amapolisa ukuba abantwana belele, xa eyika ubomi bakhe, wabaleka kuloo ndawo.
Umzimba kaDeidra wafunyanwa kamva kwiofisi yeposi. Inxalenye yecala lomsikazi yayisentanyeni yakhe, kwaye wayesekhohliwe kwisihlalo sakhe semoto.
UBurorostro wafunyanwa enetyala emva kwemizuzu engama-90 yokuxoxwa. Wagwetywa ngo-Oktobha 2, 1998.
ISocorro "iCora" iCaro
ISocorro Caro. Mug Shot
I-Socorro "Cora" Caro ugwetyelwe ukufa kwi-Ventura County, eCalifornia ngo-Ephreli 5, 2002, ngokubulala abantu bakhe oonyana abathathu, Xavier Jr, 11, uMichael, 8, noChristopher, 5, ngelixa belele. Wabe esezidubula entloko xa ezama ukuzibulala. Indodana yesine yintsana yayingenakonakala.
Ngokutsho kwabatshutshisi, uSocorro Caro ucebise ngokucacileyo kwaye wafeza ukubulawa kwamakhwenkwe njengento yokuphindisela kumyeni wakhe, uDkt. Xavier Caro, owathi wahluleka ukutshata.
UDkt. Xavier Caro kunye namanye amangqina angqina ukuba ngaphambi koNovemba 2, 1999 ukubulala abafana; USocorro Caro uye wabangela intlungu emininzi kwindoda yakhe ngezihlandlo ezisibhozo, kuquka ukulimala iliso lakhe.
Ukuchaza ngokwakhe njengexhoba lobundlobongela basekhaya, uDktCaro wafakazela ukuba ngobusuku bokubulawa kwalo mbhangqwana wayephikisana nendlela yokuqeqesha omnye wabafana. Emva koko wahamba waya emsebenzini ngenxa yeeyure ezimbalwa kwikliniki yakhe. Xa ebuyela ekhaya malunga ne-11 ntambama wafumana umfazi kunye nemizimba yabantwana.
Ubungqina beNkundla bubonise ukuba umtshato kaCaros waqala ukuhlukana emva kokuba uSocorro abe ngumphathi weofisi kwikliniki yonyango yakhe, waza wathabatha imali kwikliniki waza wabanika abazali bakhe asebekhulile.
Igosa lenze iinqununu iintsuku ezintlanu ngaphambi kokubuyisela isigwebo sentyala kunye nokucebisa isigwebo sokufa.
UCeleste Carrington wayeneminyaka engama-32 ubudala xa wayethunyelwa e-California ekuhambeni kokufa kwindlela yokubulala indoda kunye nomfazi ngexesha lolobugqwetha obuhlukeneyo kunye nokuzama ukubulala isithwaba sesithathu kweso sigqeba.
Ngo-1992, uCarlring wayeqeshwe njengomgcini weenkampani ezininzi ngaphambi kokuxothwa ngokuba. Emva kokushiya isikhundla sakhe wahluleka ukubuyela kwiinkampani ezininzi apho wayesebenze khona.
NgoJanuwari 17, 1992, uCarlton waphula enye yeenkampani, umthengisi wemoto, kunye nezinye izinto, wabiba i-magnam revolver .357 kunye nezinye iibhola.
NgoJanuwari 26, 1992, esebenzisa isitshixo, waqhekeza kwelinye inkampani kwaye ephethe i-magnum revolver engama-357, wadibana ne-janitorial cleaner, u-Victor Esparza, owayesebenza. Emva kokutshintshana okufutshane, uCarlring waphanga waza wadla u-Esparza.
Kamva waxelela abaphandi ukuba wayezimisele ukubulala uEsparza kwaye wayeziva enamandla kwaye evuyiswa ngamava.
Ngomhla ka-11 kuMatshi, ngo-1992, uKarlring waphinda wasebenzisa isitshixo ukuze angene kwenye inkampani apho wayekade esebenza njengomlondolozi. Ephethe i-revolver, wadubula waza wabulala uCaroline Gleason, owayeguqa ngamadolo, ecelwa uCarlring ukuba asuse isibhamu. UCarrington wabiba ngeeRandi 700 kunye neGleason.
Ngomhla ka-16 Matshi, 1992, wangena kwiofisi yegqirha ngokusebenzisa isitshixo ayenayo xa esebenza kwiinkonzo zelitsha kwiofisi. Ngethuba lokuphanga, wadibana noDkt. Allan Marks, owathi wadubula kathathu ngaphambi kokuba abaleke eso sakhiwo. Amanqaku asinda kwaye kamva wangqina ngokumelene neCarrington.
UCynthia Lynn Coffman
UCynthia Coffman. Mug Shot
UCynthia Lynn Coffman wayeneminyaka engama-23 xa egwetyelwe ukufa ngenxa yokuthumba , ukukrebhula, ukuphanga nokubulala uCorinna Novis eSithili saseSan Bernardino noLynel Murray e-Orange County ngo-1986.
UCoffman nomyeni wakhe, uJacob Gregory "Folsom Wolf" Marlow bobabili bagwetywa baza bagwetywa ngenxa yokubulawa okwenzeka ngexesha lolwaphulo-mthetho ukususela ngo-Oktobha-Novemba 1986.
UCoffman kamva wathi uxhoba lokuxhaphazwa kwaye uMarlow uhlanjululwe ingqondo, uyabetha, aze amlambele indlala ukuze amenze inxaxheba kwizenzo zolwaphulo-mthetho.
Wayengabesifazana bokuqala ukufumana isigwebo sokufa eCalifornia ekubeni urhulumente wavuselela isigwebo sokufa ngo-1977.
NgoJuni 26, 1988, owayehlala naye u-Kerry Lyn Dalton, u-Irene Melanie May, wahlushwa waza wabulawa nguDalton nabanye ababini. Kwakukholelwa ukuba uMeyi wayebiwe izinto ezivela eDalton.
Ngenkathi iboshwe esihlalweni, i-Dalton injobile i-asidi yebhetri ngo-Meyi ngesirinji. Ummangalelwa uSheryl Baker ushaya ngoMeyi ngepenki yensimbi yokucoca kunye ne-Baker kunye nomnye ummeli-mmele, uMarko Tompkins, waza wahlaba ngoMeyi. Kamva, uTompkins kunye nomntu wesine, owaziwa nje ngokuba "uGeorge," wahlulwa waza walahlwa umzimba kaMeyi, ongazange ufumaneke.
NgoNovemba 13, 1992, i-Dalton, iTompkins kunye no-Baker babetyala ngokuceba ukubulala. U-Baker watyala inecala lokubulala, kwaye uTompkins watyala enecala lokubulala. Kwilingo likaDalton, elaqala ekuqaleni kuka-1995, i-Baker yayingqina loshushiso. I-Tompkins ayizange ingqine , kodwa ukutshutshiswa kwanikezela iingxelo ngaye ngo bungqina bomnye wabalingane bakhe.
NgoFebruwari 24, 1995, ijaji yafumana uDalton enetyala lokubulala nokubulala kwaye wagwetywa ukufa ngoMeyi 23, 1995.
Ngo-Oktobha 26, 1997, uSusan Eubanks kunye nentombi yakhe, uRene Dodson, bebesela kwaye bebukela umdlalo weejaji kwi-bar bar xa beqala ukuphikisana. Xa babuyela ekhaya, uDodson uthe wayephelile ulwalamano kwaye wazama ukuhamba, kodwa i-Eubanks yathatha iinqwelo zakhe zeemoto waza wanciphisa amathayi akhe.
UDodson waqhagamshelana namapolisa waza wabuza ukuba baya kuhamba naye endlwini ukuze athathe izinto zakhe. Emva kukaDodson kunye namapolisa asele, i-Eubanks yabhala iincwadi ezizibulala ezihlanu kwiintsapho, uDodson kunye nomyeni wakhe, u-Eric Eubanks. Emva koko wamtshiza oonyana abane , abaneminyaka engama-4 ukuya kwe-14, waza wada wadubula esiswini.
Ngaphambili emini, uDodson watshela uEric Eubanks ukuba uSusan wayesongela ukubulala abafana. Kamva xa wathabatha itekisi esuka kuSusan ngamagama athi, "Yithi," yadibana namapolisa waza wabuza ukuba benze i-check welfare.
Amapolisa aye e-Eubanks kwikhaya waza weva ingxolo evela ngaphakathi. Apho bafumana ama-Eubanks ngamanxeba ebhokhwe kwisisu sakhe kunye noonyana bakhe abane abaye babetshulwa. Omnye wabafana bebesaphila kodwa wafa kamva esibhedlele. Inkwenkwe yesihlanu, umntakwabo ka-Eubank oneminyaka emihlanu ubudala, wayengenakonakala.
Kwakunqunywe ukuba i-Eubanks ibetshile abafana kwiintloko ezininzi kwaye kwafuneka ilayishe kwakhona isibhamu ukuze igqibe umsebenzi.
Abatshutshisi bathi i-Eubanks ibulala abafana bevutha.
Emva kweeyure ezimbini zengxoxo, ijaji yafumana i-Eubanks inetyala kwaye wagwetywa ukufa eSan Marcos, eCalifornia, ngo-Oktobha 13, 1999.
UVeronica Gonzales. Mug Shot
UGenny Rojas wayeneminyaka emine ubudala xa waya kuhlala kunye nonina nomalume wakhe, u-Ivan noVerica Gonzales, kunye nabantwana babo abathandathu. Umama kaGenny uye waya ku-rehab waza uyise wayesejele ngenxa yobundlobongela babantwana. Kwiinyanga ezintandathu kamva uGenny wayefile.
Ngokutsho kweengqinamba zenkundla, uGenny wadityhulwa yi- methamphetamine- isigxina se-Gonzales isibini seenyanga. Watshitshiswa, waxhonywa kwinqanawa ngaphakathi kwekhamera, elambile, ephoqelelwe ukuba ahlale ngaphakathi kwebhokisi, enyanzelekile kwiibhafu ezitshisayo, kwaye watshisa amaxesha amaninzi ngeeswele.
NgoJulayi 21, ngo-1995, uGenny wafa emva kokunyanzeliswa ebhakeni lamanzi eshushu kangangokuba isikhumba sakhe satshiswa kwiindawo ezininzi zomzimba wakhe. Ngokweengxelo ze-autopsy, kwathatha iiyure ezimbini ukuba umntwana ashise aze afe.
Iimbambano zikaGonzales zifunyaniswe netyala lokuhlushwa nokubulala kunye bobabini bafumana isigwebo sokufa. Babesibini isibini sokufumana isigwebo sokufa eCalifornia.
UMaureen McDermott unetyala lokumisela ukubulala kuka-Stephen Eldridge ngo-1985. Ababini abambisene nabo baseVan Nuys kunye noMcDermott babambe i-inshuwalense ye-inshorensi yemali eyi-100 000 e-Eldridge.
Ngokwemiqulu yenkundla, ekuqaleni kuka-1985, ubudlelwane bukaMcDermott no-Eldridge behla. U-Eldridge ukhononda ngesimo esingenakunyulwa sendlu kunye nezilwanyana zaseMcDermott. UMcDermott wayecaphukisa malunga no-Eldridge unyango lwezilwanyana zakhe kunye nezicwangciso zakhe zokuthengisa umdla wakhe endlwini.
Ngasekupheleni kukaFebruwari 1985, uMcDermott wabuza uJimmy Luna, osebenza kunye nomhlobo, ukuba abulale u-Eldridge ngokuchithwa ngama-$ 50,000.
UMcDermott watshela uLuna ukuba agule igama elithi "gay" emzimbeni ngesandla okanye usike u-Eldridge umdlwengula ukuze kubonakale ngathi "ukulala ngokwesini" nokubulawa kwamapolisa kuya kuthatha inxaxheba encinci ekuxazululeni imeko.
Ngo-Matshi 1985, uLuna nomhlobo, uMarvin Lee, baya ekhaya lika-Eldridge bamhlasela xa ephendula emnyango. U-Luna wambetha ngendlala, kodwa wahluleka ukumbulala, wabaleka emva kokuba u-Eldridge akwazi ukuphunyuka.
Kwiiveki ezimbalwa ezizayo, uMcDermott noLuna bachitshana ngeefowuni ezininzi. Ngo-Apreli 28, 1985, uLuna, u-Lee no-Lee umntakwabo uDondell, babuyela ekhaya lika-Eldridge, bafumana ukungena ngefestile yangaphambili yokulala eyayishiywe evulekile kubo nguMcDermott.
Xa u-Eldridge wabuyela ekhaya kamva ngaloo busuku, uLuna wamgwaza ngamaxesha angama-44, wambulala, waza wada wamlandela umyalelo kaMcDermott, wamnqumla ixhoba lexhoba.
NgoJulayi 2, 1985, uLuna wabanjwa ngenxa yokubulawa kobudala buka-Eldridge. Ngo-Agasti 1985, uMcDermott naye wabanjwa. Wahlawuliswa ngokuzama ukubulala nokubulala kunye neemeko ezikhethekileyo zokubulala ngenxa yokufumana imali kunye nokulala.
UMarvin noDondell Lee banikezelwa ukukhuseleka ekubulaweni kuka-Eldridge ngokuchitshiyelwa ukuvuma kwabo kunye nobungqina obunyanisekileyo. ULuna naye wangena kwisivumelwaniso sokumangalelwa phantsi apho athe wathwesa inetyala ekubulaweni kokuqala kwinqanaba kwaye wavuma ukunikela ubungqina ngokunyanisekileyo ekushushisweni kommangalelwa.
Ijaji ligwebe uMaureen McDermott ngelinye inani lokubulala kunye nenani elilodwa lokuzama ukubulala. Igosa lifumene iziganeko ezikhethekileyo zokuba ubulali lwenziwe ngenjongo yokufumana imali kunye nokulala. UMcDermott wagwetywa ukufa.
NgoFebruwari ka-2003, uWilliam Whiteside, oneminyaka engama-61 ubudala, wayehlala ekhaya lakhe kunye noValerie Martin, 36, unyana kaMartin, uRonald Ray Kupsch III, oneminyaka engu-17 ubudala, intombi yaseKupsch ekhulelwe, uJessica Buchanan kunye nomhlobo kaKupsch, oneminyaka engama-28 ubudala. UChristopher Lee Kennedy owayedlulileyo.
U-Whiteside noMartin badibanisana kwindawo yabo yengqesho, kwi-Antelope Valley Hospital.
NgoFebruwari 27, 2003, uMartin, u-Kupsch, uBuchanan, uKennedy kunye nomhlobo wabo uBradley Zoda babehamba kwi-trailer yakwa-Whiteside xa uMartin ekhankanya ukuba unetyala lokuthengisa iziyobisi ngamadola angamakhulu amathathu. Emva kokuxoxa ngeendlela zokufumana imali kwagqitywa ukuba babeba yi-Whiteside ngokumngenisa kwindawo yokupaka xa eshiya umsebenzi ngalobo busuku.
Nge-9 ntambama, uMartin wamgxotha uKennedy, uZoda, noKupsch esibhedlele, kodwa wanquma ukuba yayingengozini ngenxa yamangqina anokwenzeka. UMartin wenyuka ngesinye isicwangciso waza wawahlalisa abathathu endlwini yomhlobo waza wabiza uWhiteite waza wamcela ukuba awathabathele endleleni eya ekhaya evela emsebenzini.
Xa u-Whiteside efika, uKupsch, uKennedy, kunye noZoda, bonke babephakamileyo kwi-methamphetamine, bangena emotweni yakhe baza bamhlasela ngokukhawuleza, bembetha de wayengazi. Bamfaka esiqwini semoto baza bajikeleza, befuna indawo enhle yokuyeka.
Ngexesha lokuqhuba, uWhiteites wazama kabili ukuba aphunyuke esiqwini kodwa wabuyiswa emva kwezihlandlo zombini.
Emva kokumiswa, u-Kupsch wabiza uMartin waza wamxelela apho bekhona kwaye wamcela ukuba athathe i-petroli. Xa efika ngepetroli, uKennedy wayithatha waza wayithululela yonke imoto kunye neKupsch yayiyitshisa ngomlilo.
Amagunya athola imoto etshiswayo ngosuku olulandelayo, kodwa i-Whiteside isalathisi asizange ifunyanwe kude kube ngowama-10 kuMatshi emva kokuba u-Whiteside owayengumfazi wayemxelele ukuba ulahlekile. Iqela le-forensic likhangela isithuthi esitshisiweyo kwaye sathola i-remains ye-Whiteside, eninzi yayo eyayitshiswe ibe yindwa.
I-autopsy yamisela ukuba u-Whiteside ufile ngenxa yokumotheka komsi kunye nokutshiswa komzimba kwaye wayenobungozi bentloko awayeza kufa ngenxa yokuba wayengatshitshiswa ekufeni.
UValerie Martin wagwetywa waza wagwetywa ngenxa yokuphanga, ukuthumba nokubulala. UKennedy noKupsch bafumana izigwebo zobomi, bengenakho ukufumana isigwebo. UBrad Zoda, owayeneminyaka engama-14 ubudala ngelo xesha, wangqina ngombuso olwa noMartin, uKennedy noKupsch.
UMichelle Michaud kunye naye (ngoko) intombi uYakobe Daveggio bathotywa kwaye banikwa isigwebo sokufa ngenxa yokuthumba, ukuxhaphaza ngokwesondo nokubulala u-Vanessa Lei Samson oneminyaka engama-22 ubudala.
Esi sibini sifike emva kweCodvard yabo iDodge ibe kwigumbi lokuhlushwa ngamagwegwe kunye nentambo eyenzelwe ukukhusela amaxhoba abo.
NgoDisemba 2, 1997, uVanessa uSamson wayehamba e-Pleasanton, eCrazil yaseKalifornia xa uMikhaud ehamba kunye naye kunye noDaveggio bamdonsa kwivini. UMikhaud waqhubeka eqhuba ngeenxa zonke xa uDaveggio enyanzelisa uSamson ukuba agqoke ibhola gag ngelixa wayemxhaphaza ngesondo.
Esi sibini sasibophe intambo ye-nylon entanyeni yakhe kwaye ngasinye sasiyifumba kwelinye icala, kunye kunye noSamson ekufeni.
Ngokutsho kwabatshutshisi, iinyanga ezintathu uMikhaud noDaveggio bahamba bejikeleza "ukuzingela," igama elithi Michaud elisetyenzisiweyo, kubafazi abasebancinci bayabamba. Bahlaselwa ngokwesondo ngabesetyhini abasetyhini kuquka nentombi encinane kaMikhaud, umhlobo wakhe kunye nentombi eneminyaka engu-16 ubudala kaDaveggio.
Ngexesha lokugweba, uMgwebi uLarry Goodman uchaze ukuhlushwa nokubulawa kukaVanessa uSamson, "okhohlakeleyo, onobukhohlakeleyo, ongenangqiqo, onobubi, onobundlobongela, obubi, nobubi."
UTanya Jamie Nelson
UTanya Nelson wayeneminyaka engama-45 ubudala kwaye unina wabantwana abane xa egwetyelwe ukufa e-Orange County emva kokugwetywa ngokubulala umculi wenkohlakalo uHa Smith, 52, kunye nentombi yakhe eneminyaka engama-23 ubudala, u-Anita Vo.
Ngokutsho kwenkcazo yenkundla, uNksz Phillipe Zamora wafakazela ukuba uNelson wayefuna uSmith ukuba afe ngenxa yokuba wayezihlamba xa uSmith eqikelele ukuba ishishini lakhe liya kuphumelela ukuba wayithuthela eNorth Carolina.
UNelson, owayengumxhasi wexesha likaSmith, walandela isiluleko waza wahamba, kodwa endaweni yokufumana impumelelo, wagqiba ukulahlekelwa ngumzi wakhe. Wayenomsindo xa uSmith engamxeleli ukuba uya kuphinda ahlangane nomyeni wakhe wangaphambili.
Uqinisekisile uZamora ukuba ahambe naye ukusuka eNorth Carolina ukuya eWestminster, eCalifornia ngenjongo yokubulala uSmith ngokutshintshela ukuba angenise kumalungu amaninzi angqingili wesini.
Ngo-Ephreli 21, 2005, uZamora wangqina ukuba bobabini badibana noHa "Jade" Smith kunye nentombi yakhe u-Anita Vo. UNelson wabe esebetha uVo aze afe kwaye uZamora wabetha uSmith ukuba afe.
Lo mbini wazama ukuyifumana indlu ebizwa ngokuba yiSmith Smith eyaziwayo ngokugqoka, amakhadi enkoleko kunye nezinye izinto ezixabisekileyo. UZamora wabuyela eWalmart waza wathenga ipende emhlophe ababeyisebenzisela ukugubungela iintloko kunye nezandla zabo.
UNelson wabanjwa ezintlanu kwiiveki kamva emva kokufumanisa ukuba wayeqeshwe noSmith ngosuku lokubulala kwaye wayesebenzisa amakhadi ka-Smith neVo's.
UZamora wafumana isigwebo sama-25 kwiminyaka.
UNelson, oye waqhubeka efuna ukuba ungenacala, wathola isigwebo sokufa.
NgoJuni 30, 1998, uSandi Nieves wamxelela abantwana abahlanu ukuba baya kuba neqela lokulala kwaye bonke balele ekhitshini ekhaya labo baseSanta Clarita. Bakhe bangena kwiingxowa zokulala, abantwana balala, kodwa ke bavuka bexaka umsi.
Jaqlene noKristl Folden, 5 no-7, kunye no-Rashel no-Nikolet Folden-Nieves, 11 kunye no-12, babulawa ngumsindo womsi. UDavid Nieves, owayeneminyaka engama-14 ngelo xesha, wakwazi ukusinda endlwini kwaye wasinda. Kamva wangqina ukuba uNives akazange avumele abantwana bashiye indlu eshushu, baxelele ukuba bahlale ekhitshini.
Ngokutsho kweSebe le-Los Angeles County Sheriff, i-Nieves isebenzisa i-oven ye-gas ukuze yenze i-asphyxiate yabantwana i-asphyxiate, ibe isetyenzisile ukutshisa umlilo.
Ukulwa Nomntu ongaphandle
Abatshutshisi bakholelwa ukuba izenzo zeNieves zaxhaswa ngokuziphindisela kumadoda ebomini bakhe. Kwiiveki ngaphambi kokubulawa, isoka likaNives laphelisa ulwalamano lwabo kwaye yena nomyeni wakhe owayengumyeni bazama ukuxhasa inkxaso yabantwana.
U-Nieves watholwa enetyala lamanani amane okubulala, ukuzama ukubulala kunye nephoso kwaye wagwetywa ukufa.
U-Angelina noFrank Rodriguez badibana ngoFebruwari 2000 baza batshata ngo-Ephreli ngaloo nyaka. NgoSeptemba 9, 2000, uFrank Rodriguez ufile kwaye u-Angelina wayelindele i-$ 250,000 kwi-inshorensi yakhe yobomi. Kodwa kwakukho i-holdup. Ngaphambi kokuba i-coroner imisele isizathu sikaFrank sokufa, imali yomshuwalense ayiyi kukhutshwa.
Ukunceda ukukhawulezisa inkqubo, u-Angelina wabiza umphenyi waza wachaza ukuba wayifumene umnxeba engaziwa ngenjongo yokuba umyeni wakhe waswele ngenxa yesifo sobutyhefu . Kamva kwagqitywa ukuba akazange athole loo fowuni.
Kodwa u-Angelina wayelungile. UFrank wafa ngenxa yetyhefu. Ngokwemibiko ye-toxicology, uFrank wayefumene ubuninzi be-antifreeze engama-ezine ukuya kweyure ngaphambi kokufa kwakhe.
U-Angelina wabanjwa waza wagwetywa ngokubulala uFrans ngaphambi kweeveki emva kokufa kwakhe.
Abatshutshisi bakholelwa ukuba wathambisa i-antifreeze eluhlaza kwi-Gatorade eluhlaza kaFrank kwaye kwakuyimvavanyo yakhe yesithathu ukumbulala ekubeni wayethathe imali engama-250,000 ye-inshorensi yobomi.
Baxela ukuba okokuqala, wazama ukumbulala uFrank ngokumondla izityalo ezitshatyalaliswayo ezinobuthi obubi. Emva koko kwathiwa eshiya i-gas kwinqumlezo kwaye wabuya waya kumhlobo, kodwa uFrank wafumana ukuvuza.
Ngexesha lokuvavanywa kwakhe, watholakala enetyala lokusongela ubungqina obengumhlobo owayekwacetywa ukuba u-Angelina wayexubushe ngokubulala indoda yakhe njengesisombululo kwiingxaki zomtshato kunye nezemali.
Kwakukho imbali yakhe yokufumana imali kwiimimango ezahlukahlukeneyo ayezifake kwiinkampani. Kwiminyaka emithandathu wayeneminyaka engama-286,000 kwiindawo zokuhlala.
Watshutshisa indawo yokutya ngokukhawuleza yokuxhatshazwa ngokwesondo, ngoko ke ukujoliswa kokunyaniseka emva kokuba wehlise kwaye wawa esitolo, kodwa inzuzo enkulu yayisuka kwi-Company yeGerber xa intombi yakhe ixakekile kwaye yafa kwi-pacifier kunye ne-50,000 ye-inshorensi yobomi bomshuwalense. wayethathe umntwana.
Emva kokufa kukaFrank, uphando malunga nokufa kwengane yakhe eneminyaka engama-13 yavulwa kwakhona kwaye ngoku ikholelwa ukuba u-Angelina wabulala umntwana wakhe ngokususa umlindi okhuselayo kwi-pacifier kwaye wayigxotha intamo yakhe intombi ukuze adibanise umenzi ngemali.
U-Angelina Rodriguez watholwa enetyala lokubulala uFrank Rodriguez, oneminyaka engama-41 ubudala, ngokumtyhefu nge-oleander kunye ne-antifreeze. Wagwetywa ngoJanuwari 12, 2004, waza wavutha ngoNovemba 1, 2010. NgoFebruwari 20, 2014, iNkundla ePhakamileyo yaseCalifornia yaqinisekisa isigwebo sokufa kuka-Angelina Rodriguez.
U-Brooke Marie Rottiers, oneminyaka engama-30, waseCorona, wagwetywa ngomhla ka-Juni 23, 2010, ngamacala amabini okubulala owenziweyo ngexesha lokuphanga kweminyaka engu-22 uMarvin Gabriel kunye noMilton Chavez oneminyaka engu-28 ubudala. Wagwetywa ukufa.
Ngokutsho kwenkundla yamatyala, uGabriel noChaves badibanisa i-Rottiers (isiqhwala esithi "Crazy") kunye nommangalelwa uFrancine Epps xa beya kuba neziphuzo ezimbalwa emva komsebenzi.
I-Rottiers inikezela ukuba ndilale ngesondo kunye namadoda amabini ngokutshintshela imali. Wabatshela ukuba bamlandele kunye no-Epps kwigumbi lakhe le-motel kwi-National Inn e-Corona. Kwakhona kwakuhlala noOmar Tyree Hutchinson, owayengumthengisi weziyobisi.
Xa loo madoda amabini angena egumbini le-motel, u-Epps wabamba ngebhokisi xa uRottier noHutchinson behlanjululwe, baphangwa baze babetha amadoda.
Bese bayibopha abo bantu ngamacambo kagesi kunye neengxowa kunye neengxowa zemizi kunye nezinye izinto zelinen emilonyeni yabo, bavale iimfono zabo kunye nemilomo kunye ne-tepi, bafaka iiplastiki kwiiploko zabo.
Ngelixa amadoda ayexhamla, i-Rottiers, i-Epps, ne-Hutchinson bazizibonela ngokwenza iziyobisi. Emva koko balahla izidumbu kwi-trunk yemoto abaye bayishiya bayimise endleleni engcolileyo.
U-Brooke Rottiers, unina wabantwana abane, ababini kuthiwa begumbini le-motel ngethuba lokubulala, bakholelwa ukuba baqaphele ukubulala. Wayedla ngokuqhayisa ukuba wayeza kukhwela abantu ngesithembiso ngesini ngesimo semali, kodwa ke wayeza kubaphanga.
UMary Ellen Samuweli watholakala enetyala lokumbulala umyeni wakhe kunye nombulali womyeni wakhe.
Ngokutsho kobubungqina, amaSamuels aqeshe uJames Bernstein, 27, ukuba abulale umyeni wakhe oneminyaka engama-40 ubudala, uRobert Samuels oneminyaka engama-40 ubudala nge-inshurensi yemali kunye nobunikazi obupheleleyo besitolo se sandwich esitokisini ababenokubambisana nabo.
URobert Samuels wayesenkonzweni yokuqhawula umfazi emva kweminyaka emithathu engazange aphumelele ukudibanisa umtshato.
UBernstein wayengumthengisi wezidakamizwa owaziwayo kunye nomnye wabalingane ababili beentombi zikaSamuels, uNicole. Kuthiwa uncedo ekuqeshweni komntu onqabileyo ukuba abulale uRobert Samuels ngoDisemba 8, 1988. AmaSamuels atholakala emzini wakhe eNorthridge, eCalifornia, ekhungulwe kwaye edubule ekufeni.
Inyanga emva kokuba uSamuel abulawe, uBernstein wathatha umgaqo-nkqubo we-inshorensi yobomi engama-25 000 kwaye kuthiwa nguNicole nje kuphela oncedo .
Exhalabile kukuba uBernstein wayeya kuthetha namapolisa, uMary Ellen Samuels walungiselela ukubulawa kukaBernstein owabethelwa ekufeni ngoJuni 1989, nguPaul Edwin Gaul noDarrell Ray Edwards.
UGaul no-Edwards babungqina ngokuchasene namaSamuels ngokutshintshisa izivakalisi ezili-15 ukuya kubomi.
AmaSamuels abizwa ngokuthi "umhlolokazi oluhlaza" ngamapolisa kunye nabatshutshisi xa kuthe kwafumanisa ukuba kungakapheli unyaka emva kokufa komyeni wakhe nangaphambi kokubanjwa kwakhe, wachitha imali engaphezu kwama-500 000 eyayizuze kwii-inshorensi nkqubo kunye nokuthengiswa kweendlovu .
Ngexesha lenkqubo yenkundla, abashushisi babonisa i-jurors umfanekiso weSamuels ezithathwe zingangeenyanga emva kokufa komyeni wakhe. Wayelele kwibhedi yehotele, ehlanganiswe kwi-$ 20,000 eyi-dollar eyi-100 dollar bills.
Ijaji lathweswe icala likaMary Ellen Samuels wecala lokubulala likaRobert Samuels noJames Bernstein, ecelwa ukubulawa kukaRobert Samuels noJames Bernstein, kunye nokuceba ukubulala uRobert Samuels noJames Bernstein.
Ijaji yabuya isigwebo sokufa sokubulala ngamnye.
UCathy Lynn Sarinana wayeneminyaka engama-29 ubudala xa ngo-2007 yena kunye nomyeni wakhe uRaul Sarinana batholakala benetyala lokuhlasela ukubulala umntwana wabo oneminyaka eyi-11, uRicky Morales.
Abazalwana uConrad noRicky Morales bathunyelwa ukuba bahlale kunye noRaul noCathy Sarinana eRandle, Washington, emva kokuba unina, udadewabo kaRaul Sarinana, uthunyelwe ejele ngamacala atyala eLos Angeles.
Abaphathi bakholelwa ukuba abafana baqala ukuphathwa kakubi kungekudala emva kokuba baqale ukuhlala nabaSarinanas.
Ukubulawa kukaRicky Morales
Ngokwamapolisa, ngoKhisimusi 2005, uRaul Sarinana wavuma ukunyanzelisa uRicky ukuba ahlambulule indlu yokuhlambela emva kokugula kwaye akafuni ukudla isidlo seKrisimesi uCathy Sarinana wayilungiselele.
URaul wamkhangela le nkwenkwe ngokuphindaphindiweyo ngenxa yokuba akazange abe nomuvo wokuthi uRicky wayekhuthele ekucoceni indlu yokuhlambela. Emva koko wamvalela inkwenkwe ekamelweni kwaye wamqothula xa ezama ukuphuma.
U-Ricky watholakala efile kwikhefu emva kweeyure eziliqela emva koko.
I-autopsy ibonisa ukuba uRicky wasweleka ngenxa yokulimala kwangaphakathi.
Ngokwe- short pretrial yangeniswa nguMphathi weMicrosoft yaseDransside County uDkt Mark Fajardo, "Amacwecwe emzimbeni kaRicky (a) ahambelana nokubethelwa ngentambo yombane okanye isixhobo esifanayo. yonakaliswe kakhulu ...
Kwakukho izicukulo ezininzi kwi-scalp kaRicky, ngokuyinhloko ekujoliswe kwintloko yakhe. "
"Ekugqibeleni, kwakukho ukulimala kweetyhula ezininzi ezihambelana nokutshisa i-cigarettes ekhona kumzimba kaRicky ozimisele ukuba ubuncinane ubuncinane kwiiveki, ukuba kungekhona inyanga, sele edala."
UConrad Morales Ufumene Wafa
Malunga noSeptemba 2005, unina wentombazana, uRosa Morales, watshela amaSarinana ukuba wayekulungele ukuba abafana bafike ekhaya, kodwa uRaul wamxelela ukuba akanako ukufumana imali. Xa uMorales waphinde waqhubela isifundo ngo-Oktobha, uRaul wamxelela ukuba uConrad oneminyaka engama-13 ubudala wayebalekile nomlingane omdala osemtshatweni.
Bobabini baseSarinanas babethetha ngabasebenzi bezenhlalakahle elinye ibali - ukuba uConrad wayehlala nezihlobo kwelinye ilizwe.
Ngethuba lokuphandwa kukaRicky, abacuphi bafumana isidumbu sikaConrad Morales esingaphakathi kwidrafti sinokuzaliswa ngekhonkrithi ebekwe ngaphandle kweKorona.
URaul kamva wavuma ukuba uConrad wafa ngo-Agasti 22, 2005, emva kokumyala loo nkwenkwana. Esi sibini sazisa umzimba wakhe kunye nabo xa besuka eWashington baya eCalifornia.
Amajuri ahlukeneyo aphulaphule amacala atyala noRaul noCathy Sarinana.
Ummeli kaCathy Lynn, uPatrick Rosetti, wathi uCathy wayengumfazi ogxothwe kakubi kwaye wahlushwa ngengqondo waza wahamba nomyeni wakhe ngenxa yokwesaba abantwana bakhe ababini.
AmaNgqina athi uRoul wambetha waza wambetha uCathy, kodwa amanye amangqina wabona uCathy noRaul bexhaphaza uRicky bathi uCathy wayiphatha uRicky njengekhoboka, wamyala ukuba ahlambulule emva kwakhe kunye nabantwana bakhe ababini.
Amapolisa athi kwakhona abamelwane baqaphela ukuba uRicky waqala ukuthotywa ngoxa yonke intsapho yaqhubeka ibonakala ibondliwe kakuhle.
URaul noCathy Sarinana bobabili bagwetywa ukufa.
UJaneen Marie Snyder
UJaneen Snyder. Mug Shot
UJaneen Snyder wayeneminyaka engama-21 ubudala xa ngo-Ephreli 17, 2001, yena kunye nomthandi wakhe, uMichael Thornton oneminyaka engama-45 ubudala, wathunjwa, wahlushwa, waxhatshazwa ngokwesondo waza wabulala uMichelle Curran oneminyaka engu-16 ubudala.
Bobabini uSnyder noTrnton batholakala benetyala baze bagwetywa ukufa.
U-Janeen Snyder kunye noMichael Thornton baqala ukuhlangana ngo-1996 xa uSnyder, owayengumhlobo nentombi kaTntnton, wabuyela ekhaya. Abathandi ababini abangenakwenzeka bakhawuleza baqulunqa umtshato, owakubandakanya ezininzi iziyobisi kunye nobulili obudakisayo ngokungafuni ukuba amantombazana amancinane .
Ukubulawa kukaMichelle Curran
Ngo-Epreli 4, 2001, eLas Vegas, Nevada, uMichelle Curran oneminyaka eyi-16 wabanjwe nguSnyder noThannton ngoxa wayesendleleni eya esikolweni.
Ngaphezulu kweiveki ezintathu ezizayo, uCrran waxinjwa kwaye waxhatshazwa ngokwesondo kwaye wadlwengulwa yeso sibini. Emva koko ngo-Ephreli 17, 2001, baphula ngesigqabi sehashe eRubidoux, eCalifornia, bafumana isitya sokugcina esasetyenziselwa ukugcina izixhobo zehashe, ezibophekileyo izandla kunye nezinyawo, zibophe kwiihashe, zamphinda kwakhona, kwaye uSnyder wamtshiza ebunzini.
Umnikazi wepropati wathola uTrnton noSnyder egazini kwaye amapolisa awabamba njengoko bebaleka kuloo ndawo. Batshutshiswa ngokuphula nokungena kodwa bebanjwe kwi- bond dollar yezigidi ngenxa yegazi elingaphezu kwegazi elifunyenwe kwiphepha.
Umzimba kaMichelle Curran ufunyenwe wangena kwi-trailer yehashe ngumnini wepropati iintsuku ezintlanu kamva. UTotnton noSnyder bahlawuliswa ngokuthumba, ukuhlaselwa ngokwesini kunye nokubulala.
Ngethuba lokuvavanya, amangqina amabini entshutshiso atyholwa ngokuthunjwa nokudlwengulwa nguSnyder noTntnton. Ngokutsho kobubungqina babo, amantombazana amantombazana ngamaxesha ahlukeneyo ahlonywa nguSnyder ukuya eTrnton, egcinwe ngokumelene nokuthanda kwabo, anikezwa ama-dosage aqhubekekayo e-methamphetamine, ephathwa kakubi ngokwesondo kwaye ubomi babo babesongelwa.
Umcebisi kwisebe lika-Sheriff yecandelo likaNxweme wase-Santiard wabuye wafakazela ukuba ngo-Matshi 2000, waxoxisana nentombazana eneminyaka eyi-14 ubudala, ethi uthe wabanjwa iminyaka engaphezu kweenyanga nguTrnton noSnyder kwaye wayeyika ukuba baya kumbulala ukuba wazama ukuphuma. Intombazana encinci yayicinga ukuba ihlaselwe ngokwesondo xa yamnika iziyobisi ezinzima ezibandakanya i-methamphetamine kunye ne-mushroom e-hallucinogenic.
UJese Kay Peters
Ngethuba lesigaba sohlwayo , uchwepheshe weengqondo othe wathintana noSnyder wangqina ukuba uvume ukubulawa kuka-Jesse Kay Peters oneminyaka eyi-14 ubudala.
UJese Peters wayengowokuphela kwintombi kaCheryl Peters, umcebisi weenwele osebenzela uTrnton kwizinwele zakhe.
Ngokutsho kobungqina, uSnyder wamxelela ukuba ngo-Matshi 29, 1996, e-Glendale, eCalifornia, wambamba uJesse Peters ngaphandle kwendlu yakhe nasemotweni yaseTrnton.
Bamthatha baya endlwini kaS Thornton waza uSnyder wabukela njengoko uTntnton ephethe isigxina uPeters waya embhedeni waza wadlwengula. Emva koko wamcima uPeter ngaphakathi kwibhedu ngaphambi kokuba adibanise kwaye ulahla eDana Point.
U-Thornton owayengumfazi wokuqala wangqina ukuba wayeva uTntnton uthetha ngokuqhaqha intombazana encinci kwaye ukuphosa kwayo ihlala elwandle.
UTrnton noSnyder abazange bahlawuliswe malunga necala likaPeter.
UCatherine Thompson watholakala enetyala loJuni 14, 1990, ukubulawa komyeni wakhe oneminyaka elishumi, uMelvin Johnson. Injongo yayiyi-500 000 ye-inshorensi yobomi bomshuwalense apho uTolomon wayefuna ukufumana izandla zakhe.
Ngokweengxelo zamapolisa, ngoJuni 14, 1990, amapolisa athola u-9-1-1 ucingo oluvela kuCatherine Thompson etshilo ukuba wayekhwelisa umyeni wakhe kwivenkile yokutshintshwa kwezimoto zakhe waza weva into efana nokubuya ephuma kwimoto, ngoko wabona umntu ogijima esitolo.
Xa kufika amapolisa bamfumana uMelvin Thompson ngaphakathi kwintengiso yakhe, efile ngamanxeba amaninzi. UCatherine Thompson wabatshela ukuba umyeni wakhe ugcine imali eninzi kunye nokubuka kwakhe uRolex kwisitolo, bobabini babonakala bebiwe.
Ekuqaleni, amapolisa acinga ukuba ulwaphulo-mthetho luhlobene "noRolex Robber" owayelisela isela ebiza iindleko ezinkulu zeRolex kwiindawo zaseBeverly Hills. Kodwa umnini wevenkile ngasemnyango wezaziso zikaMelvin wabona umntu okhangelekisayo efika emotweni ngexesha elifanayo kunye nokudutshulwa kwaye wakwazi ukubonelela abaphandi ngeenombolo zeelayisense.
Amapolisa ayifumana kwi-ejensi yokurenta aze athathe igama kunye nedilesi yomntu owaqeshisa. Oko kwabakhokelela kuFillip Conrad Sanders oye wazeka ukuba angazi kuphela uCatherine, kodwa abo babini babandakanyeka kunye kunye ne-shady ye-real estate deal.
Amapolisa abanjwe uPhillip Conrad Sanders ngokumangalisa ukubulala, umkakhe uCarolyn kunye nendodana yakhe, uRobert Lewis Jones, ngenxa yokusola ngokufumana inxaxheba ekubulaleni.
UFilip Sanders ufunyaniswe enetyala lokubulala waza wafumana isigwebo sempilo . Umfazi wakhe wafunyanwa enetyala waza wanikwa iminyaka emithandathu kunye neenyanga ezi-14 kunye nendodana yakhe, ukuba amapolisa akholelwa ukuba waqhuba imoto eyabanjwa yanikwa iminyaka elishumi elinanye.
UFillip Sanders wambetha uCatherine Thompson njengendoda yokubulala umyeni wakhe. Nangona bekungekho ubungqina obuchanekileyo obuchazwe ngabatshutshisi abonakalise ukuba wayebandakanyekile, ijaji yamfumana unetyala kwaye wagwetywa ukufa.
UManling Tsang Williams uneminyaka engama-32 xa wafunyanwa ngecala ngo-2010 ngokubulala umyeni wakhe oneminyaka engama-27 ubudala, uNeal, noonyana, u-Ian, 3, no-Devon, ngo-Agasti 2007. Kwada kwada ngoJanuwari 19, 2012. wagwetywa ukufa.
Ngonyaka olandelayo bathenga i-condo eRowland Heights kwaye ngo-2003 u-Ian, unyana wabo wesibini wazalwa.
Ngokwenxalenye enkulu, uManling wabonakala engumama nomfazi onothando, nangona engekho umgcini wendlu, kodwa wayengumama osebenzayo. Wayesebenza njengomgcini we-waitress kwi-Marie Callender kwiSixeko soMashishini.
U-Neal wayengumntu ozinikeleyo kwaye wayesebenza nzima kwi-inshurensi yomsebenzi, ngokuqhelekileyo achitha ixesha elisebenzayo umsebenzi ekhaya kwikompyutha yakhe.
Emva koko ngo-2007, uManling wahlangana kwakhona nomlilo wasesikolweni esiphakamileyo nge-MySpace kwaye bobabini baqala ukuba nomcimbi. Emva koko, ngoJuni 2007, uManling waqala ukuxelela abahlobo malunga nesibongo sokuthi wayehlala e-Neal ekhubaza abantwana aze azibulale.
Ngomhla ka-Agasti 7, 2007, uD Devon no-Ian badla i-pizza kunye baza balala. Njengoko balala, uManling wagqoka iiglavu zerabha, wangena ekamelweni lekwenkwenkwe waza wahlutha abafana.
Wabe esekhompyutheni yakhe kwaye wahlola i-MySpace, ngokukodwa, iphepha lephrofayili lakhe, waza waphuma waya kudibana nabahlobo bokusela.
Xa ebuyela ekhaya uNeal wayelele. Waba nekrele le-Samurai waza waqhaqhaza waza wabetha i-Neal, wamnquma ngamaxesha angama-97 njengoko elwa, izandla zakhe zazityhawula njengoko wayezibamba ezama ukuzikhusela ekufeni. Ekugqibeleni, wamncenga ukuba amncede, kodwa wakhetha ukumvumela ukuba afe.
Emva koko wathumela inqaku lokuzibulala, okwenza ukuba kubonakale ngathi kwakusuka kuNeal, ukugxeka ngokubulala abantwana kunye nokuzibulala. Wahlambulula igazi, waqokelela iingubo zakhe zegazi waza wayilahla.
Emva kokuba sele iphelile, wagijima ngaphandle waza waqala ukumemeza kwaye isihlwele samelwane sakhawuleza sakha. Ekuqaleni, uManling uthe wayengenakulala kwaye uphumelele xa ebuyela ekhaya wafumana indoda yakhe. Kodwa ekufikeni kwamapolisa, watshintsha ibali lakhe. Uthe wayekade evenkile.
Waya kwisikhululo samapolisa kwaye iiyure zamemeza zaza zacima, zicela abaphandi ukuba uNeal kunye nezingane zilungile. Wabambelela kwibali lakhe malunga nokufumana izidumbu de kubekho omnye wabacuphi bamxelele ngebhokisi yegayibhethi enegazi eliyifumene kwimoto yakhe.
Kwakuloo mzuzu uManling waqonda ukuba u-alibi wakhe wayengumntu okhuphayo kwaye waqhekeza waza wavuma ukubulala.
Ngowe-2010 inkundla yamatyala kaManling Tsang Williams yaqala. Wayengahlawulwanga nje kuphela ngamanani amathathu okubulala okuqala kunye neemeko ezikhethekileyo zokubulala ezininzi kunye nokulala, okwenza ityala lokubulala.
Ukumfumana unetyala kwakungekho mngeni kwijaji. Kwathatha iiyure ezisibhozo kuphela kuzo zonke iibalo, kuquka neemeko ezizodwa. Nangona kunjalo, xa kufika isigwebo uManling Williams, ijaji ayinakuvumelana ngokuphila okanye ekufeni.
Kwakudingeka abhekane nesigqeba sesibini senkundla yesigwebo kwaye ngeli xesha kwakungekho nto yokufa. Igosa licebisa isigwebo sokufa.
UMgwebi uRobert Martinez wavumelana kunye nejaji kwaye ngoJanuwari 12, 2012, wagweba uWilliams ukuba abulawe, kodwa ngaphandle kokuvakalisa uluvo lwakhe kwizenzo zakhe zobugebengu.
"Ubungqina bunyanzelisa ukuba ummangalelwa, ngenxa yezizathu zobugovu, wabulala abantwana bakhe babini," kusho uMartinez.
Wayebhekiselele kwisishukumisela emva kokubulala njengokuba, "i-narcissistic, ubundlobongela kunye nentsha," kwaye wathi wayenqwenela ukushiya abantwana bakhe, kwakukho amalungu amalungu entsapho ayeza kubakhathalela.
Ngamazwi akhe okugqibela kuWilliams, uMartinez wathi, "Andiyi kubaxolela ngenxa yokuba abasesikweni sokuxolela abahlali nathi. Ndiyathemba ukuba iintsapho zenu zifumana uxolo."
Ayikwazi ukufunda iikhowudi ze-OBD-II?
Inkqubo yeNgcaciso yeNgcaciso Inkcazo
Iipodcasts zee-Cockball Coaches
Imiphumo yeNtlawulo yeNgeniso kuKhulo loQoqosho
Indlela Yokuba Ngumntu Oyintando
Kufuneka Ufundele abafundi beeKholeji -Bound Students
Uluhlu lweeNkonzo zoThengwa lwePainting Acrylic